Sida loo maro labo jeer FIFA 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sidee loo dhaafaa FIFA
FIFA waa mid ka mid ah taxanaha ugu caansan ee fiidiyoowga adduunka. Qeybta difaaca ee Farshaxanka elektarooniga ah, sanad walba cutub cusub oo ka mid ah jilitaanka rasmiga ah ee kubada cagta, mid jir iyo mid dijitaal ah, ayaa ku dhaca khaanadaha dukaanka waqtigooda, diyaarna u ah inuu madadaaliyo malaayiin taageerayaal ah oo ka kala imanaya daafaha dunida. Adigu waxaad ka mid tahay, laakiin khabiir kuma lihid ciyaarta; runti, ma aadan fahmin sida xirfadaha loo sameeyo.
Si ka sii saxan, waad la yaabanayd beryahan sida loo qaado laba talaabo FIFA laakiin ma helin cashar fudud oo sharraxaya sida loo sameeyo. Marka waa runtaa? Marka ha walwalin: hadaad rabto, waan kuu sharixi karaa sidaad hadafkaaga ku gaarto. Dhinaca kale, xitaa haddii ay suurtagal tahay in lagu ciyaaro cinwaannada taxanaha ah ee FIFA iyadoo la adeegsanayo kaliya makaanikada aasaasiga ah, barashada xirfadaha ayaa ah "muusig" gebi ahaanba ka duwan!
Maxaad dhahdaa markaa? Diyaar ma u tahay inaad dhex gasho mudnaanta makaanikkan FIFA ee "horumarsan"? Fikir ahaanteyda ma sugi kartid inaad "dhigto" daafacaas oo isku dayaya inuu carqaladeeyo ciyaartoydaada inta aad kujirto wajiga weerarka. Aynu tagno, markaa waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka kiiska. Waxbaba igama hadhin inaan kuu rajeeyo aqrin wanaagsan iyo baashaal.
Sida loo qaado laba talaabo FIFA
Sida loogu tababaro FIFA si loo qaado labada tallaabo
Sida loo qaado laba talaabo FIFA Mobile
Kahor intaadan galin faahfaahinta habraaca gudaha sida loo qaado laba talaabo FIFA, Waxaan u maleynayaa inaad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato "dhaq dhaqaaqa kubada cagta".
Hagaag labada marin waa feint loogu tala galay jahwareerinta ama dribbinta qofka ka soo horjeeda. Taasi waa, waxaan isku dayeynaa inaan jilno xiriir aan la leenahay kubbada aan run ahaantii dhicin, ka dibna waxaan u rogeynaa qeybta dambe qodob uusan ciyaaryahanka kale fileynin.
Marka la soo koobo, way fududahay in la dhaho intii la qabtay waxaana hubaal ah haddii aad raacdo kubada cagta inaad horeyba u ogtahay waxaad ka hadlayso. Double Pass ayaa laga heli karaa FIFA sanado badan waxaana badanaa loo isticmaalaa soo noqoshada xargaha oo geliya a iskutallaabta ka Jiid.
Cinwaanada taxanaha Farshaxanka elektarooniga ah, dhab ahaan, makaanikada laba-laablaha ah ayaa si gaar ah waxtar ugu leh agagaarka ganaaxa, gaar ahaan markaad la kulanto ciyaartoy aan weli baran inay si sax ah u maareeyaan wejiyada difaaca.
Marka la soo koobo, waxaan si buuxda u fahamsanahay sababta kugu kalifaysa inaad rabto inaad barato sida loo sameeyo feintadan ciyaarta fiidiyaha ah ee aad ugu jeceshahay runtiina hagahan ayaa halkan loo joogaa sababtaas awgeed.
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso, uma baahnid inaad wax badan ka walwasho qaybta FIFA ee aad haysato; guud ahaan, makaanikyada laba-marinka ah ayaa asal ahaan isku mid ka ah dhammaan daabacadaha. Marka waxaad rabtaa inaad ogaato sida loo qaado laba talaabo FIFA 21, FIFA 20 ama cutub kasta oo ka mid ah silsiladaha, adoo raacaya taladayda waa inaad ku guuleysataa hadafkaaga adiga oo aan lahayn dhibaato gaar ah.
Kadib markaan si kooban u sharaxay ujeedooyinka laba jibbaar, Waxaan dhihi lahaa waxaa la joogaa waqtigii waxqabadka iyo sharxi lahaa sida loo dhigo FIFA.
Si aad u sii wado, marka aad ciyaarta gasho, qaab kasta, si fudud u dhaqaajisoanalog bidix dhanka jihada e samee analogga saxda ah samee 90 darajo "dayax nus". Markaad saas sameyso, waxaad arki doontaa in ciyaaryahanka aad xukuntay uu qaban doono laba jibbaar.
Waa inaad halkaas si fiican wax ugu barataa su'aal xagal dhanka loo wareejinayo analogga saxda ah. Wax walba waxay kuxiranyihiin booska jirka ciyaaryahankaaga, sidaa darteed waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid, tusaale ahaan, inaad goorta lagu bilaabayo usha bidix oo dhammee u dhaqaaq dhinaca midig ama goorta gadaal la sameynayo.
Sida kaliya ee si buuxda loogu fahmi karo sida tan loo sameeyo ayaa ah in la isku dayo in si toos ah loo sameeyo intuu kubbada la ordayay qaab kasta oo FIFA ah. Marka la soo koobo, waa mid ka mid ah xirfadahaas ay tahay inaad dhowr jeer isku daydo inaad barato.
Sida iska cad waa adiga ku hagaaji saxarada meesha aad rabtosi tan loo sameeyo waa hagaag fadlan iskuday markale dhowr jeer si aad u fuliso ficilka. Xaqiiqdii, xitaa haddii makaanigga laba-geesoodka ah ay macquul tahay in ficil lagu sameeyo, dhibku wuxuu yimaadaa markay tahay ka faa'iideysiga si habboon inta lagu jiro cayaaraha FIFA.
Inta kale, FIFA waa cinwaan lagu ciyaaro xakameeyaha sidoo kale kombuyuutarka, sidaa darteed nidaamku waa isku mid. Xaqiiqdii, cutubyada taxanaha qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho jiir iyo kiiboodh, laakiin waxaan aad ugula talinayaa inaadan isku dayin inaad ku sameyso xirfado hababkaan wax-ku-oolka ah, maadaama laga yaabo inaadan guuleysan oo si kasta oo ay ahaataba aad qatar ugu jirto.
Ku saabsan Wiki sharaxInta lagu jiro ciyaaraha "kaniisadaha" ee taxanaha Farshaxanka elektarooniga ah, waxaa jira siyaabo ka habboon kuwa kale in lagu tijaabiyo labada marin.
Si hufan, waxaan kugula talinayaa inaad tagto, laga bilaabo shaashadda weyn ee FIFA, ee tabarka CIYAARAHA. Halkan waa inaad ka heshaa ikhtiyaarka Tijaabi xirfada ama si ka sii wanaagsan wali, Fagaaraha tababarka.
Xaaladda koowaad waa suurtagal in la doorto dhaqdhaqaaqa faleebo, laga yaabee kuwa horumarsan, ee ay wajiga kaala kulmaan daafac ay tahay inuu kaa joojiyo. Macnaha guud ayaa faa'iido badan u leh tababarka laba jibbaar iskuna day inaad u adeegsato inaad ku garaacdo qofka kaa soo horjeeda.
Si kastaba ha noqotee, marka laga hadlayoFagaaraha tababarka, kan dambe ayaa ku dhigaya goolhayaha hortiisa, oo kuu damaanad qaadaya a meel bannaan oo ku filan ku tababaraan xirfado. Tani waxay u badan tahay inay tahay habka ugu faa'iidada badan ee lagu tababaro laba talaabo, maaddaama aad leedahay dhammaan nabadda maskaxda adduunka si aad u sameyso.
Guud ahaan, isku daygii ugu horreeyay ee labalaab ah ayaa si dhammaystiran u fashilma, maaddaama ay tahay makaanik ay tahay in la isku dayo oo "gudaha laga dhigo". Marka waxaan kugula talinayaa inaad halkaan ku tababarto, adigoo isku dayaya inaad dhowr jiho u marto oo aad laba tallaabo qaaddo.
Waqtiyada ugu horeeya, hadaadan awoodin inaad qabato xirfaddan, waxaa laga yaabaa inay ku soo gasho waxtar samee analogga saxda ah sameyso leexo badan, sidaa darteed waad arki kartaa waxa dambe ee tilmaamaya. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talinayaa inaad u isticmaasho habkan kaliya barta bilowga ka dibna aad barato sida looga faa'iideysto tallaabada laba-geesoodka ah.
Xaqiiqdii, adeegsiga analogga saxda ah waxoogaa "si aan kala sooc lahayn" ah waxay u horseedi kartaa falal aan loo baahnayn inta lagu guda jiro ciyaarta. Marka la soo koobo, habka ugu fiican ee lagu barto laba talaabo, markaad ogaato badhanka, waa iskuday dhowr jeer "garoonka bilaashka ah", ilaa xoogaa aqoon u leh xirfadda la gaaro.
Waan ogahay: qabashada hawlgalkani waxay noqon kartaa mid "caajis" ah, laakiin haddii aad rabto inaad barato sida ugu habboon ee looga faa'iideysto makaanikada ciyaarta, waa inaad.
Sidee u leedahay Waad ciyaari jirtay FIFA Mobile (aka FIFA Soccer) taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga ah oo aad jeclaan lahayd inaad ogaato haddii laba-gudub ay suurtogal tahay qaabkan ciyaarta? Dhib ma leh, isla markiiba waan kuu sharxi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Xaaladdan oo kale, nidaamka xirfadeed ee ciyaarta waa mid "fowdo ah". Xaqiiqdii, sida aad uga akhrisan karto bogga rasmiga ah ee farshaxanka elektarooniga ah, ciyaaryahan kasta wuxuu leeyahay dhaqaaqo xirfadeed u gaar ah, taas oo lagu dhex mari karo dul wareeg badhanka toogashada & Xirfadda.
Xirfadaha qaabkan ku jira waxaa ka mid ah Croquette ah, cirib cirib, laastik ah, baaskiil iyokubada suulkaaga kor ugu qaad. Sidaa darteed, suurtagal maahan in la sameeyo laba tallaabo, haddii aan laga yaabee in lala yeesho ciyaartoy gaar ah, laakiin qibradeyda ciyaaraha marna kuma aanan arkin awooddan ciyaarta.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, FIFA Mobile waxay si cad u leedahay ciyaar xaddidan oo ka badan cutubyada soo jireenka ah ee taxanaha, sababtan awgeedna, xirfadaha ayaa door aad u hooseeya ka ciyaaraya nooca ciyaarta.
Inta soo hartay, maadaama aad tahay taageere taxanaha Farsamada elektaroonigga ah, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso bogga boggeyga u gaarka ah FIFA, halkaas oo aad ka heli karto hagitaanno kale oo adiga kuu noqon kara.
Sida loo xakameeyo wicitaanada fiidiyowga ee WhatsApp
Sida looga saaro Netflix TV-ga